၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Hemp လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးမှု
အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Hemp လိုင်စင်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်
30 2019ပြီလ XNUMX ရက်နေ့တွင် - အီလီနွိုက်ပြည်နယ်က၎င်း၏လျှော်လျှောက်လွှာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သင်၏အီလီနွိုက်စ်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်ကြေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုအောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင်ကြည့်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရှာဖွေကူညီရန်ကျေနပ်ပါတယ်။
သင်၏ Illinois Hemp Application ကိုစတင်ရန်နှိပ်ပါ.
အီလီနွိုက်စ်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်ကြေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုသွားရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်လျှောက်လွှာမှမျိုးစေ့အထိရောင်းချခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုအီလီနွိုက်ပြည်နယ်သို့တိုးချဲ့လိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကူညီနေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ခေါ်ဆိုသည်။ CBD သို့မဟုတ်စက်မှုလျှော်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်စက်မှုလျှော်လိုင်စင်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်
လျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းသစ်များအတွက်အများပြည်သူမှတ်ချက်ပေးသည့်ကာလသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်တွင်ကုန်ဆုံးကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးဌာန၏နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှုအရသိရသည် ဘုံမြေပြင် ထုတ်ဝေ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးလိုင်စင်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းမှတင်ပလီကေးရှင်းများလျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပဲတင်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဒီနေ့ကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။
အီလီနွိုက်စ် ' စက်မှု Hemp အက်ဥပဒေ 2019 သီးနှံနှစ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ဝင်။ အစောပိုင်းမွေးစားသူများသည်အချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းနိုင်သော်လည်းနှစ်များတစ်လျှောက်ပြည်နယ်၏လယ်ယာမြေများတွင်ပြောင်းဖူးနှင့်ပဲပုပ်များတစ်လျှောက်တွင်လျှော်ကြေးသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။
စက်မှု Hemp ၏အဓိပ္ပာယ်
Industrial Hemp အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ တွင်စက်မှုလျှော်ကန်ကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်သည် -
"စက်မှုလျှော်" ဆိုသည်မှာအောက်ပါထုတ်ပေးသောလိုင်စင်အရစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သောမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၉ tetrahydrocannabinol ပမာဏသည် ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသောမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ကြီးထွားနေသည်ဖြစ်စေ Cannabis sativa L. နှင့်ထိုစက်ရုံ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုဆိုလိုသည်။ ဤအက်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဤနည်းဖြင့်တရား ၀ င်ပါ ၀ င်မှုရှိခြင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာလျှော်မှထုတ်လုပ်သောသို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသည့်အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အချောထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်သည်။
ဆေးခြောက် sativa လျှော်, ဒါပေမယ့်လည်း ...
ထိုဆေးခြောက်сативаတွင် THC ၏ ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းသောခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်ရှိသည်
၎င်းကိုလိုင်စင်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးအီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်တွင်တရား ၀ င်ရောက်ရှိခဲ့သည်
မျိုးစေ့များ၊ ကိုယ်ပွားများနှင့်အစားထိုးများအားလုံးကို AOSCA အောက်တွင်အသိအမှတ်ပြုရမည်။
ပြင်ပoneကတစ်minimumကအနည်းဆုံးandကနှင့် ၅၀၀ စတုရန်းပေအကျယ်အ ၀ န်း။ မိုးလုံလေလုံကြီးထွားမှုအတွက်
ကော်ပိုရေးရှင်း၊ LLC စသည့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား၊
မိတ်ဖက်, တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, etc ။ ;
ပုဒ်မခွဲ (က) (1) မှတုန့်ပြန်;
Global Positioning အပါအဝင်မြေareaရိယာ၏တရားဝင်ဖော်ပြချက်
ပုဒ်မ ၁-၆၀ တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းproveရိယာကိုသက်သေပြရန်အတွက်လယ်ယာမြေတစ်ခုဖြစ်သည်
$ 1,100 ၏သက်ဆိုင်အခကြေးငွေ။
သင်၏ canna စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်းတို့၏စက်မှုထုံစည်းခွင့်လိုင်စင်ဖြင့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပါ ဆေးခြောက်ရှေ့နေများ။
ဒါမှမဟုတ်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ chatbot ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ ကျနော်တို့ထိတွေ့ပါလိမ့်မယ်!
by Lauryn | စက်တင်ဘာ 11, 2020 | CBD သတင်းများ, CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု, လျှော် CBD, လျှော်ကုမ္ပဏီများ
CBD နှင့် Skincare - CBD သည်သင်၏အသားအရေအတွက်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။ CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များပြီးစျေးကွက်ကသာကြီးထွားလာသည်။ မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းသည့်စျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
by Lauryn | စက်တင်ဘာ 1, 2020 | ဆေးခြောက်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ပေါင်းခံ, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, CBD သတင်းများ, လျှော် CBD
ဆေးခြောက်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်ခြင်းဆေးခြောက်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်ခြင်းသည်ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲတူးစင်သို့မဟုတ်ထိ မိ၍ စားမိပါကသို့မဟုတ်စားသုံးနိုင်သောအစားအစာကိုစားဖူးပါကသင်ထုတ်ယူဖြန့်ဖြူး။ သွားသောသန္နိဌာန်အားဖြင့်တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ကဘာကိုကြည့်တာလဲ။
သင်၏ CBD အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြော်ငြာခြင်း
by Lauryn | သြဂုတ် 25, 2020 | CBD ကိုကြော်ငြာခြင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ဆေးခြောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းကြော်ငြာ, CBD သတင်းများ, လျှော် CBD, လျှော်ကုမ္ပဏီများ
သင်၏ CBD အမှတ်တံဆိပ်ကိုဘယ်လိုကြော်ငြာရမလဲ ဆေးခြောက်စျေးကွက်ကြော်ငြာကြော်ငြာ CBD နှင့်ဆေးခြောက်သကြားလုံးအရက်ဆိုင်ကြော်ငြာသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သင်၏ဆေးခြောက်တံဆိပ်ကိုကြေငြာရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ THC Creative Solutions မှ Corey Higgs သည်ငါတို့အားပေးအပ်ရန် ...
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်ကြေးအက်ဥပဒေသည်လျှော်စိုက်ပျိုးရန် (ကြီးထွားရန်) သို့မဟုတ်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ထုတ်လုပ်ခြင်း) အတွက်လိုင်စင်လိုအပ်သည်။
အီလီနွိုက်စ်စက်မှုဇုန်ပိတ်ပင်မှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ တွင်လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်လျှောက်လွှာတစ်စောင်လိုအပ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) အရအရာသုံးခုသာလိုအပ်သည်။ အပိုင်းသုံးပိုင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
(၂) စက်မှုလျှော်စိုက်ပျိုးရန်အသုံးပြုမည့် Global Positioning System ကိုသြဒီနိတ်များအပါအဝင်မြေareaရိယာ၏တရားဝင်ဖော်ပြချက်၊ နှင့်
(၃) ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များလိုအပ်ပါကစက်မှုဆိုင်ရာလျှော်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတို့ပါ ၀ င်နိုင်သောစက်မှုဇုန်လျှော်စိုက်ပျိုးရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်သုတေသနတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖော်ပြချက်၊ သို့သော်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များစက်မှုဇုန်လျှော်၏စီးပွားဖြစ်ရောင်းကန့်သတ်ရန်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရလိမ့်မည်မဟုတ်။
ထို့အပြင်အီလီနွိုက်စ Hemp Law သည်လျှော်ကြေးစိုက်ပျိုးသူများထံမှ ထပ်မံ၍ လိုအပ်သည်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့လုပ်ရမည် -
အခကြေးငွေ, ဆိုင်းဘုတ်နှင့်ပုံစံများအတွက်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး ဦး စီးဌာနကသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများ။
လျှော်၏စိုက်ပျိုးသူများနှင့်မတူဘဲ, လျှော်၏ပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်လိုအပ်သည်မဟုတ် - သာမှတ်ပုံတင်။
ပုဒ်မ ၁၀ (ခ -၅) တွင်ဤသို့ဖော်ပြထားသည် -
လူတစ် ဦး ဦး သည်ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့်ဌာနသို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်ကြေးကိုဤပြည်နယ်တွင်မပြုလုပ်ရ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်, သင်တရားဝင်သစ်သီးစိုက်ပျိုးပြီးနောက် - သူကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကနေဖြစ်စေမဖြစ်စေ - သင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုမဆိုအရေအတွက်သို့သို့စတင်စတင်နိုင်ပါသည် - ဒါပေမယ့်ပြည်နယ်နှင့်အတူသင်၏မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးမှသာ။
ထို့ကြောင့်လျှော်ကိုစိုက်ပျိုးသူများသာလိုင်စင်လိုအပ်ပုံရသော်လည်း CBD အာရုံစူးစိုက်မှုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များသို့တင်ပို့သူများသည်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ကန်နာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်းတို့၏စက်မှုထွန်းကားခွင့်လိုင်စင်ဖြင့်အကူအညီလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်ရှေ့နေများကို (၃၀၉) ၇၄၀-၄၀၃၃ သို့ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးသတင်းများအရအီလီနွိုက်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည်လျှောက်လွှာများကိုမစတင်ရသေးပါ။ အချိန်တန်သောအခါသင်၏လုပ်ငန်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလျှော်ကြေးအတွက်လိုင်စင်ရနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ။
316 SW ဝါရှင်တန်လမ်း, Suite 1A
Peoria, အီလီနွိုက် 61602
ဖုန်းနံပါတ်: (309) 740-4033 || Email: tom@collateralbase.com
150 အက်စ် Wacker Drive ကို, Suite 2400,
ချီကာဂို IL, 60606 ယူအက်စ်အေ
ဖုန်းနံပါတ်: 312-741-1009 || Email: tom@collateralbase.com